चाडबाड नजिकिदै गर्दा बजारको वेथितिमाथि ध्यान पु-याउन अब पनि नहतारिने ?(भिडियो) « News24 : Premium News Channel
चाडबाड नजिकिदै गर्दा बजारको वेथितिमाथि ध्यान पु-याउन अब पनि नहतारिने ?(भिडियो)
प्रकाशित मिति : Sep 03, 2019
१. चाडबाड नजिकिदै गर्दा बजारको वेथितिमाथि ध्यान पु¥याउन अब पनि नहतारिने ?
चाडवाडले छोपिसकेको छ मुलुकलाई । चाडवाडको चहलपहल सुरु हुँदै गर्दा आम नेपाली दशैं र तिहार जस्ता ठूला चाडमा जुटाउनु पर्ने सामग्रीको जोहोमा ध्यान पु-याउन थालेका छन् । दशैं र तिहारमा बजारमा अन्य समयको भन्दा चौबर बढी विक्रि हुने गर्दछ यो स्वभाविक पनि हो । तर वेथितिले गाँजेको बजार भने चाडबाडमा उपभोक्तालाई निर्ममताका साथ लुट्ने दाउमा नै रहने गर्दछ । नाम मात्रको अनुगमन, त्यसमाथि बजारमा हुने कालोबजारीमाथि कुनै पनि प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनु र कालोबजारी गर्ने व्यापारी एवं व्यवसायीलाई कडा कारवाही नहुँदा बजार अनियन्त्रित र मनपरिरुपमा दौडिरहेको छ, जस्को असर उपभोक्ताले भोग्दै आएका छन् ।
अझ स्थानीय तहको गठन पछि बजार अनुगमन र नियन्त्रण स्थानीय तहले गर्ने कि स्थानीय प्रशासनले भन्ने विवाद बढ्दा बजार यसपटक पनि झनै चौपट बन्ने अवस्था देखिएको छ । तर स्याङ्जामा भने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले नै बजार अनुगमनमा देखाएको अग्रसरताले स्थानीयवासीले राहतको महसुस गरेका छन् ।
२.ढोरपाटन शिकार आरक्षका अतिक्रमित जग्गा हटाउन थालियो गम्भीर पहलकदमी
अवसर पाएपछि अतिक्रमण । यो नेपालको हरेक क्षेत्रमा लागू हुने वेथितिको एक रुप हो । राजनीतिक उथलपुथल हुँदा होस् या अन्य कुनै घटनाक्रममा नेपालको धेरै क्षेत्रमा वेथितिको बिभिन्न रुप देखिने गरेको छ । सशस्त्र युद्धको समयमा नै पनि यस्तै भयो र त्यस्को असर र प्रभाव अझै पनि समाजमा परेकै छ । यसैको देखासिकी गर्दै नेपालको एकमात्र वन्यजन्तु शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षमा पनि २ सय ३७ हेक्टर बढी जग्गा अतिक्रमणमा प¥यो ।
१ हजार ३ सय २५ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष अतिक्रमित बन्दा यहाँ रहेका वन्यजन्तु मात्र नभइ चारवटा भन्दा बढी तालहरुको समेत अस्तित्व लोप भयो । तर ढिलै भएपनि अतिक्रमणमा परेको आरक्षको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानको थालनी भएको छ । आरक्षको जग्गा अतिक्रमण गरी वसोवास गर्दै आएका ३ हजार बढी परिवारलाई त्यहाँबाट हटाउन थालिएको छ भने आरक्षलाई पूर्ववर्तीरुपमा ल्याउने प्रयास पनि अघि बढाइएको छ ।
३.अब पोखरावासीलाई शारीरिक व्यायाम र खेलको तिर्सना मेटन उपस्थित भयो ‘स्पोट्र्स क्यासल’
बरु नर्सिङ होम र अस्पताल खोल्नेमा जोड नगर तर शारीरिक अभ्यासका लागि एउटा रंगशाला या व्यायामशाला बनाइदेऊ– युरोपमा एक समय चर्चा र प्रयोगको शिखरमा रहयो यो मान्यता । हुन पनि मानिसहरुलाई शारीरिक अभ्यास गर्ने, योगा गर्ने, दौडने र खेलकुद जन्य गतिविधिमा सहभागी बन्ने अवसर दिलाए रोग र विमार आफै टाढा हुन्छन् भन्ने मत प्रभावशाली बन्यो र त्यस्को असर सकारात्मक पनि रहयो र अझै रहदै आएको छ ।
नेपालमा पनि अहिले मानिसहरुलाई मर्निङ वाकका साथै शारीरिक अभ्यासका लागि आवश्यक ठाउँको अभाव बढ्दै जाँदा अस्पताल र नर्सिङहरु भने थपिएका थपिएकै छन् । स्वस्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने खेलकुदका लागि आवश्यक स्थान नहुँदा मानिसहरु घरभित्र नै खुम्चेर बस्न बाध्य छन् ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पोखरामा भने उत्साही खेलप्रेमीहरुले स्पोर्टस् क्यासल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । खेलकुदका बिभिन्न गतिविधि र आवश्यक शारीरिक अभ्यासका निम्ति पोखरावासीका लागि स्पोट्र्स क्यासल योग्य थलो बन्ने सम्भावना र विश्वास सबैमा पलाएको छ ।
पर्वत पहिराे : मृतक आठ जनाको सामूहिक दाहसंस्कार, एक अझै भेटिएनन्
कालापानीमा सशस्त्रको नियमित गस्ती, भारतीय सेनाकाे डरले भागेकाहरू गाउँ फर्किन थाले
फ्रन्टलाइनमा खटिने नर्सकाे पीडा : के काेराेना लागेका बिरामीको हेरचाह गर्नु पाप हाे ?
आज धेरै ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना : बाढी-पहिरो पनि जान सक्ने, सतर्क हुन अनुराेध
access_time 10:18 am
access_time 9:51 am
मोरङ, २ असार । बेलबारी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम विवादमा आएको छ ।
बागलुङ, ०२ असार । बागलुङमा दूधको मूल्य वृद्धि भएको छ। बागलुङ दुग्ध व्यवसायी सङ्घले सोमबारदेखि
पर्वत, ०२ असार । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-३ दुर्लुङ काउलेमा शनिबार रातिको पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका